मौसम परिवर्तनसँगै सरुवा रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
मौसम परिवर्तनसँगै सरुवा रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा
समुन्द्रा घिमिरे काठमाडौँ माघ २४
अहिले बिहान बेलुका जाडो भए पनि दिउँसो गर्मी बढ्न थालेको छ। पछिल्ला केही दिन मौसममा आएको बदलीका कारण मानिसहरु बिरामी परिरहेका छन्।
यो मौसम परिवर्तनको समय हो। जाडो सकिएर गर्मी लाग्ने समयमा हुने मौसम परिवर्तनले मान्छेको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्दै गएको छ। जाडोयाम सकिनु अगावै बजारमा गर्मी मौसममा देखिने खालका बिरामीको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको छ। काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा सरुवा रोगका बिरामीको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको अस्पतालले जनाएका छन्।
ऋतु परिवर्तनसँगै हुने शीतवायुको सम्पर्क, प्रदुषण, एलर्जी वा संक्रमणका कारण रुघाखोकी जस्ता सम्स्या देखिन थालेको डाक्टरहरु बताउछन्। बारम्बार सिगान आउने, हाँच्छ्यु आउने, टाउको दुख्ने, शरीर गल्ने आदि जस्ता लक्षणहरु देखिएमा रुघाखोकी भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसखाले समस्या हुनबाट बच्न र भइसकेपछि उपचारका लागि सचेत रहन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आग्रह गरे। मौसम परिवर्तनका समयमा यसखाले समस्या देखिने भन्दै त्यसमा सचेत रहनुपर्ने उनी बताउँछन्।
गर्मी मौसम सुरु नहुँदै ज्वरो, झाडाबान्ताका बिरामी अस्पतालमा आउने क्रम बढेकोे शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता अनुप वास्तोलाले बताए। उनका अनुसार एक सिजनमा यसखाले रोगका दुई हजारभन्दा बढी बिरामी अस्पतालमा आउने गर्छन।
दूषित पानी (मल मूत्र मिसिएको पानी) को प्रयोग, लामो समयसम्म भण्डारण गरिएका खानेकुरा खादा मौसमी रोग लाग्न सक्ने उनी बताउँछन्। रोग नलाग्न उमालेको पानी अथवा निर्मलीकरण गरेको पानी मात्र सेवन गर्न डाक्टरको सुझाव छ।
के हो सरुवा रोग?
चिकित्सा विज्ञानका अनुसार सरुवा रोग भन्नाले रोगी व्यक्तिबाट स्वास्थ व्यक्तिबाट सर्ने रोगहरु भन्ने बुझिन्छ। दूषित हावा, पानी, दिसा–पिसाब, सरसफाइको कमी आदि कारणबाट एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सजिलै सरुवा रोग सर्न सक्छन्।
गर्मी मौसममा देखा पर्ने सरुवा रोगहरु के के हुन?
गर्मी मौसममा विभिन्न खालका सरुवा रोगहरु देखापर्छन्। जसमा हेपाटाइटिस अर्थात् टाइफाइड, डेंगु, स्क्रवटाइफस, झाडापखला, टाइफाइडजस्ता रोगहरु पर्छन। असोजपछि मलेरिया, हात्तीपाइले, जापानिज इन्सुपलाइटिस जस्ता रोग देखिन्छन्।
यी रोगबाट कसरी बच्ने?
जुनसुकै रोगबाट बच्न सबैभन्दा पहिला आफ्नो पक्षबाटै चनाखो हुनु पर्ने डाक्टरहरु बताउँछन्। दुषित खाना र पानीवाट सरुवा रोग सर्ने भएकाले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। निरन्तर स्वास्थ्य जाँच, सन्तुलित आहारविहारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने डाक्टरहरु बताउँछन्।
प्रकाशित २४ माघ २०७५, बिहिबार | 2019-02-07 18:15:19